Booliiska Swedan oo Baaraya Dil ka dhacay degmada Vestras – Radio Daljir
Booliiska Swedan oo Baaraya Dil ka dhacay degmada Vestras
Agoosto 11, 2015 8:24 b 0
Talaado, Ogoosto 11, 2015 (Daljir) — Boliska dalka Sweden ayaa shaaciyey inay gacanta ku dhigeen Nin u dhashay dalka Eritrea oo lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey weerar shalay ka dhacay Bakhaar ku yaalla Degmadda Västerås oo ku taalla Bartamaha Sweden, isla markaana ay dhanka W/galbeed kaga toosan Caasimadda dalka Sweden ee Stocholm.
Taliyaha Boliska Västerås, Per Ågren oo Shir Jaraa’id qabtay ayaa sheegay inay qabteen labo qof oo ka dambeeyey qalalaasaha ka dhacay Bakhaarka Ikea Store.
Waxa uu sheegay in mid ka mid ah Eedeysanayaasha sheegtay inuu yahay Magangalyo-doon Eritrean ah.
Taliyaha waxa kaloo uu tilmaamay in Eedeysane kale oo ku lug lahaa dhacdadaasi isagoo dhaawac ah la dhigay Isbitaalka.
Ma kala cadda inuu Eedeysanaha dhaawacan uu yahay Eritrean iyo in kale.
Labada Eedeysane ayaa la sheegay inay shalay (Isniin) tooreey ku dileen Hooyo 55 jir ahayd iyo wiilkeeda oo 28-jir ah.
Dhinaca kale, Ku-xigeenka Dacwad-baaraha Guud, Eva Moren ayaa u sheegtay Warbaahinta Swedishka inuusan falkaasi ku lug lahayn siyaasad ama arrin shaqsiyadeed, waxayna xustay inuusan jirin wax xiriir oo ka dhexeeya Eedeysanaha iyo Dhibanayaasha la dilay.
Garyaqaanadda Eedeysanaha la qabtay, Maria Wilhelmsson ayaa u sheegtay Wakaalladda Wararka ee TT News Agency inuusan Eedeysanaha wax dembi ah gelin.
Waxay intaasi raacisay in Eedeysanaha oo 23-jir uu si fudud qalad ugu galay goob qaldan iyo waqti qaldan.
Afhayeenadda Shirkadda Ikea, Daniela Rogosic ayaa maanta sheegtay inuu sii xirnaan doono Bakhaarka dadka lagu dilay ilaa amar dambe.
Iyadoo la hadlaysay Wargeyska The Local waxay sheegtay inay ku-dhawaad 300 oo shaqaale ah ka hawlgalaan Bakhaarka dadka lagu dilay, balse ay xaqiijin Karin tirade shaqaale ee ku sugnaa gudaha Bakhaarka, xilliga Tooreyda lagu dilay Dukaan-gadayaasha.
Shirkadda IKEA waxay can ku tahay oo ay farsameeyaan, isla markaana iibiyaan Qalabka Guryaha, Jikooyinka Korantadda iyo wixii soo raaca.
Muuqaal yar oo Video ah oo la soo dhigay Websaytka VLT ayaa waxaa ka muuqday Nin Bolis ah oo mid ka mid ah Eedeysanayaasha ku qabtay bar ay Basaska joogsadaan oo ku taalla duleedka Bakhaarka IKEA.
Muquaalka waxaa kaloo laga arki karaa Boliska oo Eedeysanaha dhulka ku jiidaya, inkastoop aan si waadix ah lo oarki Karin Wejiga Eedeysanaha.
Daljir Bosaaso:- Cawa iyo Daljir Salaasa_11_agosto 2015 & Wariye Maxamuud Cabdi Ibraahim